Mpanamboatra kitapo misy rivotra | Orinasa sy mpamatsy kitapo be rivotra i Sina
Ny kitapo ovy misy rivotra dia mamokatra tontolo iainana mety amin'ny karazana vokatra rehetra izay mitaky fikorianan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny lamba ao anaty kitapo. Ho an'ny fitehirizana sy fitaterana azo antoka, ireto kitapo ireto dia afaka misoroka ny vokatra tsy ho simba amin'ny hamandoana sy ny bobongolo. Etsy ankilany, ireo kitapo ireo dia mety amin'ny fikirakirana, fitahirizana ary fitaterana.
Kitapo marobe misavoana HV62
Kitapo matevina misy rivotra dia vita amin'ny virjiny PP, ny sasany amin'izy ireo dia atambatra amin'ny harato. Izy ireo dia malaza amin'ny fambolena mba hitahiry na hanovana legioma satria afaka mampiroborobo ny rivotra izy ireo ary afaka miaina ny vokatra.
Kitapo harona matevina HV45
Mazava ho azy fa manana an'arivony an'arivony kitapo misy rivotra izahay. Ny Ventilated Bulk Bag dia mamela ny fikorianan'ny rivotra mankany amin'ny vokatra entina ao anaty kitapo.